24 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo no na wɔmma wo ngodua ngo kurennyenn a wode begu kanea biara mu+ asɔ daa.+ 3 Aaron nsɔ kanea a esi ntwamutam a ɛsɛn Adanse no ho no anim wɔ ahyiae ntamadan no mu, na ɔnhwɛ sɛ ebesi so fi anwummere akosi anɔpa wɔ Yehowa anim daa. Ɛyɛ ahyɛde a mubedi so daa, mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 4 Ɔnsosɔ akanea+ no wɔ sika kaneadua+ no so wɔ Yehowa anim daa.+ 5 “Afei fa esiam muhumuhu tõ paanoo dumien a wɔayɛ no sɛ kawa. Fa esiam no efa nkyem du mu abien tõ paanoo biako biara. 6 Yɛ no akuw abien; hyehyɛ asia wɔ ɔfã biara+ wɔ sika pon no so wɔ Yehowa anim.+ 7 Na fa ɛhyɛ a edi mũ to kuw biara so, na eyi yɛ paanoo a ɛbɛyɛ nkae ade,+ ogya afɔre a wɔbɔ ma Yehowa. 8 Homeda biara ɔmfa mmesi Yehowa anim.+ Ɛyɛ apam a me ne Israelfo apam kosi daa. 9 Ɛbɛyɛ Aaron ne ne mma dea,+ na ma wonni wɔ baabi a ɛyɛ kronkron,+ efisɛ ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron a efi ogya afɔre a wɔbɔ ma Yehowa no mu. Ɛyɛ ahyɛde a ɛbɛtena hɔ daa.” 10 Da bi Israelni bea bi babarima a ne papa yɛ Egyptni+ kofii Israelfo mu, na Israelni bea no ba no ne Israelni barima bi fii ase hamee+ wɔ nsraban no mu. 11 Aberante a ne maame yɛ Israelni yi fii ase kasa tiaa dinkɛse+ no, na ɔkaa ho abususɛm.+ Enti wɔde no brɛɛ Mose.+ Ná ne maame din de Selomit, Dibri a ofi Dan abusuakuw mu no babea. 12 Afei na wɔpɛ sɛ wohu asɛm pɔtee a Yehowa bɛka wɔ ho,+ enti wɔde no siei.+ 13 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 14 “Fa nea ɔkaa abususɛm no bra nsraban no akyi.+ Afei wɔn a wɔtee nea ɔkae no nyinaa mfa wɔn nsa ngu+ ne ti so, na asafo no nyinaa nsiw no abo.+ 15 Na ka ma Israelfo nte sɛ, ‘Obiara a ɔbɛka ne Nyankopɔn ho abususɛm no, ɔbɛsoa ne bɔne. 16 Enti wonkum nea ɔka Yehowa din ho abususɛm no.+ Asafo no nyinaa nsiw no abo. Obiara a ɔbɛkasa atia dinkɛse no,+ ɔhɔho oo, kuromanni oo, wonkum no. 17 “‘Sɛ obi bɔ ɔkra bi ma owu a, ɛsɛ sɛ wokum ɔno nso.+ 18 Na sɛ obi bɔ ayɛmmoa bi ma owu a, ɔmfa bi nsi ananmu, ɔkra nsi ɔkra ananmu.+ 19 Sɛ obi di ne yɔnko dɛm a, nea ɔyɛe no, wɔnyɛ ɔno nso bi.+ 20 Nea abu nsi nea abu ananmu, aniwa nsi aniwa ananmu, ɛse nsi ɛse ananmu. Dɛm a ɔmaa ne yɔnko dii no, wɔnyɛ no saa bi.+ 21 Nea obekum aboa+ no, ɔmfa bi nsi ananmu,+ nanso nea obekum onipa de, wonkum no bi.+ 22 “‘Ɔhɔho oo, kuromanni+ oo, atemmusɛm koro na ɛwɔ hɔ ma mo nyinaa, efisɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn.’”+ 23 Afei Mose ne Israelfo kasae, na wɔde nea ɔkaa abususɛm no baa nsraban no akyi besiw no abo.+ Enti Israelfo yɛɛ nea Yehowa hyɛɛ Mose no pɛpɛɛpɛ.